Ungamthola kanjani udokotela wokungasebenzi kahle kwe-erectile nokuthi yini ongayilindela - Imfundo Yezempilo | Julayi 2021
Umphakathi, Ukuphila Kahle Imfundo Yezempilo Inkampani, Imfundo Yezempilo Umphakathi Imininingwane Yezidakamizwa Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Izidakamizwa Vs. Umngani Inkampani, Izindaba Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Izilwane Ezifuywayo Inkampani, The Checkout Izindaba Umphakathi, Inkampani Ukuphila Kahle
Main >> Imfundo Yezempilo >> Ungamthola kanjani udokotela wokungasebenzi kahle kwe-erectile nokuthi yini ongayilindela
Ungamthola kanjani udokotela wokungasebenzi kahle kwe-erectile nokuthi yini ongayilindela
Uma uhlangabezana nokungasebenzi kahle kwe-erectile (ED), ungahle uzibuze ukuthi kufanele ubize muphi udokotela. Indawo enhle yokuqala uku nodokotela wakho wokunakekela oyinhloko. Ngokuya ngezinkinga zakho ezithile zezempilo bangase bakudlulisele kuchwepheshe wezempilo yamadoda noma i-urology (urologist), noma uchwepheshe wehomoni (i-endocrinologist).
Ngakho-ke kuyini ukungasebenzi kahle kwe-erectile, vele?
Ukungasebenzi kahle kwe-Erectile yisimo esivame kakhulu ukuthi abantu baseMelika abangaphezu kwezigidi ezintathu bahlangabezana naso unyaka nonyaka. I-ED, ngenye indlela eyaziwa ngokuthi ukungabi namandla, kulapho umuntu elwela ukuthola noma ukugcina ukwakhiwa okuqinile.
Ngokuvamile kungatholwa ngokwakho, ngezimpawu ezibandakanya:
Ukwazi ukuthola ukwakhiwa kwesinye isikhathi, hhayi ngaso sonke isikhathi lapho ufuna ukuya ocansini
Ukwazi ukuthola ukwakhiwa, kepha ungakwazi ukuligcina isikhathi esanele ngokwanele ukuya ocansini
Ayikwazi ukufeza ukwakhiwa nganoma yisiphi isikhathi
Lokho kusho ukuthi, amadoda amaningi afuna ukwelulekwa ngabezempilo ukuthola ukuthi iyiphi imbangela yokungasebenzi kahle kwe-erectile, okubavumela ukuthi baqale ukwelashwa okuphumelela kakhulu.
Impilo yezocansi ibhizinisi elixakile, lifaka imisipha, izinzwa, ama-hormone, imithambo yegazi nobuchopho. Lokhu kusho ukuthi kungabangelwa yizinto eziningi, kufaka phakathi:
Izimo zezokwelapha, njengesifo senhliziyo, isifo sikashukela, i-cholesterol ephezulu, noma umfutho wegazi ophakeme
Izinkinga ezingokwengqondo, njengokucindezeleka, ukukhathazeka nokudangala
Ukukhetha indlela yokuphila, njengokukhuluphala ngokweqile, utshwala obuningi, ukubhema, ukusebenzisa izidakamizwa ezingekho emthethweni
Imithi, efana ne-anti-depressants, antihistamines, ne-beta blocker yimithi embalwa nje engadala ukungasebenzi kahle kwe-erectile.
Inkolelo evamile ukuthi iminyaka ibangela i-ED. Ubudala, noma kunjalo, abwenzi imbangela ukungasebenzi kahle kwe-erectile, kepha isimo sivame kakhulu emadodeni amadala. Lokho kusho, noma ngabe uneminyaka emingaki, ungathola izingqinamba ngomsebenzi we-erectile.
Ngenhlanhla, iningi lamacala e-ED ayelapheka futhi ayelapheka. Noma icala lakho lingelapheki ngokuphelele, kunezindlela eziningi zokwelashwa eziphumelelayo zokunciphisa izimpawu ukuze ujabulele idrayivu yocansi enempilo.
Yimuphi udokotela ongasiza ngokungasebenzi kahle kwe-erectile?
Udokotela wakho wokunakekela oyinhloko, udokotela we-urologist, noma i-endocrinologist bonke bayakwazi ukuxilonga nokwelapha ukungasebenzi kahle kwe-erectile. Yize izindawo zabo zobungcweti zihlukile, kungenzeka ukuthi bonke bazokwenza ukuhlolwa komzimba, futhi babuze imibuzo ngomlando wakho wezokwelapha.
umkhuhlane umkhuhlane b kubi kakhulu
Udokotela wokunakekelwa okuyisisekelo
Odokotela bokunakekelwa okuyisisekelo (ama-PCP) ngokuvamile babhekwa njengendawo yokuqala yokungena ohlelweni lokunakekelwa kwezempilo. Baqeqeshelwe ukuxilonga izimo ezahlukahlukene, ngakho-ke bayindawo enhle ukuqala lapho unenkinga yezempilo.
I-PCP yakho izobuza imibuzo ethile mayelana nezimpawu zakho nomlando wezokwelapha. Lezi izibonelo ezimbalwa zemibuzo abangayibuza:
Ingabe njengamanje uthatha noma imiphi imithi noma izithasiselo? Uma kunjalo, ziyini?
Ngabe usebenzisa izidakamizwa ezingekho emthethweni?
Ingabe unazo izifo ezingalapheki?
Uyaphuza utshwala noma uyabhema?
Uvivinya kangaki umzimba?
Chaza ubunzima ngokufakwa kwakho.
Bazokwazi nokuhlola ukuhlolwa komzimba. Kuvamile ukuthi odokotela balalele inhliziyo yakho futhi bahlole umfutho wegazi lakho, baphinde bahlole isitho sakho sangasese, amasende, nokuguqa ngokungajwayelekile.
Ukuhlolwa kwegazi nomchamo kuvame ukusetshenziselwa ukuhlola i-cholesterol yakho, ushukela wegazi, i-triglycerides, i-testosterone, njll.
I-PCP yakho ingakunika imithi ye-ED yakho noma ikudlulisele kochwepheshe uma kudingeka.
Udokotela wezifo zomchamo
I-PCP yakho ingakudlulisela kudokotela we-urologist uma kudingeka usizo ekuxilongweni noma ekwelashweni.
Udokotela wezifo zomchamo ungudokotela ogxile emkhakheni wokuchama nohlelo lokuzala lwabesilisa. Abagcini nje ngokwelapha ukungasebenzi kahle kwezocansi, kepha baphinde baphathe nezifo zezinso, isinye, i-prostate, i-urethra, kanye nezicubu ze-pelvic, kufaka phakathi amatshe ezinso zomdlavuza, ukungalawuleki, kanye nokutheleleka.
Yize i-urologist yakho izobuza imibuzo eminingi efana ne-PCP yakho, udokotela we-urologist unokuqeqeshwa okujulile ukuphatha izinkinga eziyinkimbinkimbi zokwakhiwa, kufaka phakathi lezo ezidinga ukuhlinzwa. Njengokungakhululeki njengokukhuluma ngempilo yakho yezocansi, kungakuhle ukuthi uvuleke futhi ube sobala ngangokunokwenzeka nodokotela wakho ukuze akwazi ukusiza kangcono.
Noma nini lapho uvakashela udokotela, ungahle uthande lungiselela imibuzo ethile , njenge:
Ingabe lesi simo esesikhashana?
Yiziphi izinketho zokwelashwa?
Kuze kube nini ngibona ngcono?
Ingabe ikhona imiphumela engemihle ekwelashweni?
Ngaphezu kokuhlolwa okwenziwa yi-PCP yakho, udokotela wakho womchamo angasebenzisa nokuhlolwa okwengeziwe okufana nalokhu:
ukuhlolwa kwegazi ngamazinga ama-hormone
i-penile tumescence yasebusuku (i-NPT).
I-NPT isivivinyo sobusuku obubodwa esisebenzisa izinzwa ukuqapha ukuthi ngabe unezinto (ezingavamile kakhulu nezijwayelekile) zokuvuswa kokuzithandela lapho ulele.
Udokotela we-urologist futhi angenza ukuhlolwa kwamakholomu edijithali ukuthola ukuthi ngabe kukhona yini okungajwayelekile kwe-prostate. Ungakhathazeki, lokhu kuvame ukungaphatheki kahle.
Udokotela we-urologist anganikeza imishanguzo yokwelapha i-ED yakho, futhi anikele nangezinye izindlela zokwelapha njengokuhlinzwa nokufakelwa.
Isazi se-endocrinologist ngudokotela ogxile ohlelweni lwe-endocrine. Ngamanye amagama, udokotela wehomoni.
Ukunakekelwa kwakho okuyinhloko kungakudlulisela kudokotela we-endocrinologist uma ukungasebenzi kahle kwe-erectile kubangelwa yisifo se- uhlelo lwe-endocrine , njengesifo sikashukela noma i-hypogonadism (lapho umzimba wakho ungakhiqizi ngokwanele i-hormone yowesilisa, i-testosterone).
Uma imbangela yokungasebenzi kahle kwe-erectile isifo sikashukela, i-endocrinologist ingahle ikunikeze umthamo we-sildenafil ongu-25, 50, noma u-100 mg.
Uma unamazinga aphansi e-testosterone, udokotela we-endocrinologist angakuqala ekwelashweni kwe-hormone esikhundleni.
OKUSHIWO: Ukwelashwa kwe-Erectile ukungasebenzi kanye nemithi
Kuthiwani ngochwepheshe bezempilo yengqondo?
Uchwepheshe wezempilo yengqondo, onjengomeluleki, isazi sokusebenza kwengqondo, noma udokotela wezifo zengqondo, angasiza ekunqumeni ukuthi isimo sengqondo sidala i-ED yakho. Zisiza nokwelapha lezi zimo.
Udokotela wakho angakudlulisela kuchwepheshe wezempilo yengqondo uma uhlangabezana nanoma yiziphi kulezi zimpawu ezilandelayo ngokuhlangana nokungasebenzi kahle kwe-erectile:
Izinga eliphezulu lokukhathala
Izimpawu zokucindezeleka, kufaka phakathi ubunzima bokugxila, ukulahlekelwa intshisekelo kwimisebenzi, imicabango yokuzibulala, noma ukuzizwa ukhathele ngaso sonke isikhathi
Izinkinga zobudlelwano nezinkinga zokuxhumana
Abelaphi bazokubuza imibuzo ngempilo yakho yangasese, umlando wakho, nobudlelwano bakho, ukunquma ubukhulu bezimo zempilo yengqondo. Bangase bakwenzele ukuthi ugcwalise uhlu lwemibuzo.
Ngokuya ngokuxilongwa, ochwepheshe bezempilo yengqondo bangancoma imishanguzo kadokotela yokwelapha ukugula ngengqondo, okuzosiza nasekunciphiseni izimpawu ze-ED yakho. Bangaphakamisa nezinguquko zendlela yokuphila, njengokuzindla, ukuzivocavoca umzimba, nokudla okuhlanzekile.
Ukuphatha kanjani ukungasebenzi kahle kwe-erectile?
Ukwelashwa okuthandwa kakhulu, kolayini wokuqala kokungasebenzi kahle kwe-erectile yimithi kadokotela, efana nale:
sildenafil ( I-Viagra )
tadalafil (I-Adcirca, I-Cialis )
vardenafil ( I-Levitra , Staxyn )
i-avanafil ( Stendra )
OKUSHIWO: IStendra vs Viagra
Thola ikhadi lesaphulelo sekhemisi
Ngingayithola yini incwadi kadokotela eku-inthanethi yeCialis, Viagra, noma omunye umuthi we-ED?
Uma ungakhululekile neze ukukhuluma nodokotela wakho ubuso nobuso nge-ED, imitholampilo eminingi nezinkampani zomshuwalense zinikeza ukubonisana nodokotela ku-inthanethi noma ocingweni ukuze ukwazi ukuthola incwadi kadokotela ngaphandle kokudinga ukuvakashela ihhovisi mathupha. Uma uthatha isinqumo sokuthenga umuthi wakho ku-inthanethi, qiniseka ukuthi uvela ekhemisi elihlonishwayo futhi eliqinisekisiwe ukugwema izidakamizwa mbumbulu.
Yiliphi ikhambi elingcono kakhulu lemvelo lokungasebenzi kahle kwe-erectile?
Enye inketho kubantu abazizwayo enamahloni Ukukhuluma nodokotela wabo ngempilo yabo yezocansi ukuqala ngokuthenga noma nge-counter counter. Lezi ngezinye zezinto ezaziwa kakhulu futhi ezisebenza kahle ezizanywa ngabesilisa kuqala:
Izinguquko zendlela yokuphila ye-ED
Ukunciphisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa notshwala okungekho emthethweni
Ukuvivinya umzimba okwandayo
Ukusebenza ngezinkinga zobudlelwano
Ukwelashwa kwemvelo kwe-ED
OKUhlobene : Umhlahlandlela Wokwelashwa Kwemvelo Nemithi yokwelashwa kokungasebenzi kahle kwe-Erectile
Ukuze uthole imiphumela emihle, odokotela abaningi bancoma ukuhlanganisa amanye ala makhambi emvelo nomuthi kadokotela.
Ezinye izinketho zokwelashwa zifaka:
Ukufakwa kwe-penile namadivayisi we-vacuum
Ukwelashwa kwehormone nokujova kwe-penile / suppository (isb. alprostadil )
Yini iSudafed futhi isetshenziselwani?
I-Torsemide vs. Lasix: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
isibindi isitho esikhulu esigaya izidakamizwa namahomoni emzimbeni.
yini ezokwehlisa umfutho wegazi ngokushesha
okungcono ngaphezu kwekhawunda elibuhlungu lomphimbo nomuthi obandayo
indlela yokwelapha i-earache kubantu abadala
ungasho kanjani ukuthi i-nexplanon yakho yephukile
iliphi ikhambi lasekhaya elihle kakhulu lokutheleleka ngemvubelo
yini ebangela amazinga aphezulu e-creatinine egazini